Fitaovana fonon-tanana azo itokisana - Mpamboatra ny fonon-tanana vita tanana any Sina, Mpamatsy
Fandraisana tanana mahazatra
Ny baoty nitrile 100% dia tsy hiteraka allergy latabatra amin'ny hoditry ny zanak'olombelona. Fahaiza-miaina mahery kokoa anti-puncture, fahaiza-miteraka anti-bakteria ary fahaizana manohitra ny simika. Lava-miendrika volo, matevina, fandidiana mora kokoa. Malemy fanahy sy mahazo aina. Ny cuffs vita amin'ny paosy dia mora mora kokoa sy miasa. Nahazo ny fanamarinana CE CE sy ny taratasy fanamarinam-pirenen'i FDA amerikana Nahita ny fikaohana ara-pahasalamana momba ny fiadiana simika ara-pahasalamana ara-tsimokaretina Amerikana EN-374.